Ny lahatsoratr'i Dave Hodgson momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Dave Hodgson
Dave Hodgson dia talen'ny varotra sy fizarana any Amerika Avaratra Zeiss Multimedia Devices, vondrona iray ao anatin'ny fizarana vokatra mpanjifa an'ny Zeiss, mpanamboatra solomaso fakan-tsary, masolavitra ary sakoroka. Ny fitaovana multimedia dia misy ny headset Zeiss VR One ary fitaovana azo ampiasaina amin'ny ho avy miaraka amin'ny lantia manokana.
Fiakaran'ny vidin'ny VR amin'ny famoahana sy marketing
Alarobia 3 Janoary 2018 Dave Hodgson
Hatramin'ny nanombohan'ny marketing maoderina dia takatry ny marika fa ny fananganana fifandraisana amin'ireo mpampiasa farany no fototry ny paikady ara-barotra mahomby - ny famoronana zavatra manetsika fihetseham-po na manome traikefa dia matetika no misy fiatraikany maharitra indrindra. Miaraka amin'ny fivadihan'ny mpivarotra amin'ny tetika nomerika sy finday, ny fahaizana mifandray amin'ireo mpampiasa farany amin'ny fomba miroboka dia nihena. Saingy, ny fampanantenan'ny zava-misy virtoaly (VR) ho traikefa manitrika